Khin Ma Ma Myo's Blog: September 2010
People Power Revolution Handbook No.2 by Free Burma Federation
ရွေးကောက်ပွဲဆန့်ကျင်ရေး အတွက် ဖြန့်ဝေရန် လက်ကမ်းစာစောင် (မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား သမဂ္ဂ)
Sun Tzu Poem by Khin Ma Ma Myo
အချိန်ကား- (၂၀၀၇)ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၆) ရက်။
နေရာကား- ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်တနေရာ။
'မြေးလေးကလဲ နောက်ကျလိုက်တာကွယ်။ ဘာများ ဖြစ်နေသလဲ မသိဘူး'
မှောင်ရိပ်က သန်းနေပေမယ့် လက်ကျန် ဖယောင်းတိုင်တိုလေးကို မီးမညှိရဲ။ မြေးလေးပြန်လာပြီးမှ ထမင်းလက်ဆုံစားကြရမှာမို့ ဖယောင်းတိုင်တိုလေးကို မီးညှိလို့ မဖြစ်နိုင်။ မြေးအဖွားနှစ်ယောက်ထဲ ရှိနေတဲ့ဘ၀မှာ မြေးလေးမျက်နှာလေးကို တစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးမှ ထမင်းစားလို့ မြိန်ခဲ့ရတဲ့ အချိန်ကာလတွေက ကြာခဲ့ပါပကောလား။
ကျိုးတို့ကျဲတဲ ကြမ်းပြင်လေးပေါ်မှာ ခင်းထားတဲ့ ဖျာစုတ်လေးပေါ်မှာ လှဲချရင်း မြေးလေးအလာကို စောင့်မျှော်နေမိသည်။ အသက်ရှစ်ဆယ်အရွယ် ဇရာက ဖိစီးလာတာကြောင့်လား မသိ။ စိတ်က နည်းနည်း ပန်းလိုက်တာနဲ့ လူက မောပြီး နုံးချိနေတတ်သည်။ မြို့ထဲမှာ ဈေးသွားရောင်းသော ပျံကျဈေးသည် မြေးလေး ပြန်လာမှသာ ညနေစာဟင်းလေးများ ပါလာတာမို့ နေ့လည်စာ မစားထားရသည့် ၀မ်းဗိုက်ထဲက တကြုတ်ကြုတ်မြည်နေပြန်သည်။
အပြင်က အမှောင်ထုက တစတစ ကြီးစိုးလို့ လာနေသည်။ မြေးလေး အရိပ်အယောင်ကား ပေါ်မလာသေး။ စိတ်ပူပန်ရလွန်း၍ ရင်ဘတ်ထဲက အောင့်သလို ဖြစ်လာသည်။ အောင့်နေသော ရင်ဘတ်လေးကို ဖိရင်း မေတ္တာသုတ်ကို ရွတ်ဆိုပွားများနေမိသည်။ အခုတလော မြေးလေးပြန်ပြောနေတာတော့ ကြားရသည်။ မြန်မာပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် သံဃာတော်များက စီတန်းလှည့်လည်ပြီး မေတ္တာပို့ ဆုတောင်းပေးနေကြသည်တဲ့။
ရုတ်တရက် မြေးလေးရဲ့အသံကို ကြားလိုက်ရတော့ ၀မ်းသာသွားမိသည်။ ဒါပေမယ့် မြေးလေးအသံက ခါတိုင်းလို မဟုတ်။ မောပန်းနေသည်။ တိမ်ဝင်နေသည်။ တခုခုများ ဖြစ်နေလေရော့သလား။
အမှောင်ထဲမှာမို့ မြေးလေးကို အသံပြုရသည်။ မြေးလေးက အဖွားနားသို့ တရွေ့ရွေ့ လျှောက်လာသည်။
'အဖွား၊ သားခေါင်းကို အရိုက်ခံရတယ်'
လှဲနေရာမှ ကပျာကယာ ထထိုင်မိသည်။ နံရံပေါ်မှ မီးခြစ်လေးကို ယူပြီး၊ ဖယောင်းတိုင်တိုလေးကို အမြန်ထွန်းလိုက်မိသည်။ မြေးလေးက ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲ ဖျာပေါ်မှာ လှဲချလိုက်သည်။
'ဒီနေ့ ဆင်မင်းဈေးဘက်မှာ စစ်သားတွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ်ကောင်တွေက လူတွေကို သေနတ်တွေနဲ့ပစ်၊ တုတ်တွေနဲ့ ရိုက်ကြတယ် အဖွား'
'သားက ဈေးရောင်းနေတာပါ။ ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်း ရောက်လာတော့ သားလဲ တခြားလူတွေလိုပဲ အားပေးတာပေါ့။ အဲဒီမှာ စစ်သားတွေနဲ့ ကြံ့ဖွတ်ကောင်တွေက ရှေ့နောက်ညှပ်ပြီး လူမှန်သမျှကို ဆီးရိုက်ပြီးတာ။ ထွက်ပြေးတဲ့လူတွေကိုလဲ သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်။ သားတောင် အပြေးကောင်းလို့ လွတ်လာတာ'
'ဖက်ဆစ်တွေ၊ ကြေးစားစစ်သားတွေ။ ပြည်သူကို ဒုက္ခပေးပြန်ပြီ'
အဖွားနှုတ်က နာကြည်းစွာ ပွင့်အန်လိုက်သော စကားလုံးများ ထွက်ပေါ်လာသည်။
' ဖြစ်မှဖြစ်ရလေ မြေးလေးရယ်။ အဖွား ဆရာဝန် သွားပင့်ပေးမယ်နော်'
မြေးလေးက ခေါင်းကို ဖြည်းဖြည်းလေးခါသည်။
'ပိုက်ဆံမရှိဘူးအဖွား။ သားမှာ ပိုက်ဆံနည်းနည်းလေးပဲ ကျန်တာ။ ဒီနေ့ည အဖွားစားဖို့ ဘာမှ ပါမလာဘူး။ နံနက်ကျမှ ဒီပိုက်ဆံလေးနဲ့ မုန့်ဟင်းခါးသွားစားနော်အဖွား'
မြေးလေးက အိတ်ထဲမှ ပိုက်ဆံအနွမ်းလေးများကို ထုတ်ပြီး အဖွားလက်ထဲ ထည့်ပေးသည်။
'အဖွားအတွက် ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့နော်။ မြေးလေး အခုခေါင်းမူးနေတယ်မလား။ အိပ်လိုက်နော်။ မနက်ကျရင် ကောင်းသွားမှာပါ'
မြေးလေးရဲ့ နဖူးပေါ်က ဆံစလေးများကို သပ်ပေးရင်း အဖွားရဲ့ မျက်လုံးက မျက်ရည်များ စီးကျလာသည်။ မြန်မာတမျိုးသားလုံးဆီမှာ စစ်ကျိန်စာများ သင့်နေလေလျော့သလား။ ဒီအတိုင်းပဲ အဖွားတွေးမိသည်။ အဖွားရဲ့ အတွေးစများကတော့ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းခြောက်ဆယ်ကျော် အချိန်ကာလဆီသို့။
အချိန်ကား- ၁၉၄၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ။
နေရာကား- ပဲခူးရိုးမ အနောက်ခြမ်းဒေသ။
'သခင်သိန်းမြင့်ကို ဖက်ဆစ်တွေ မိသွားပြီ။ သူနဲ့ အတူ ကြေညာစာတမ်းတွေပါ မိသွားတယ်'
'ဖတပလအဖွဲ့ချုပ်ကြီးက ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ နယ်ချဲ့ဖက်ဆစ်ဒမြ ဂျပန်လူရိုင်းများကို မောင်းထုတ်ကြ ဆိုတဲ့ ကြေညာစာတမ်း အမှတ် (၁)ပဲ'
'ကျုပ်တို့တွေ ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပြီး၊ အခုလုပ်နေတဲ့ ပြောက်ကျားအခြေခံဒေသဖော်ထုတ်ရေးနဲ့ ပြောက်ကျား တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးတွေကို အရှိန်မြှင့် လုပ်ကြဖို့ လိုတယ်။ စစ်တပ်ကို ဂျပန်တွေက မျက်စိဒေါက်ထောက်ကြည့်နေတာ။ လှုပ်ရှားဖို့ ခက်တယ်။ ကျုပ်တို့ ကွန်မြူနစ်ပါတီက ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို မြေအောက်တော်လှန်ရေး နည်းနာတွေနဲ့သာ ကြိုမလုပ်ထားရင် ဒီတော်လှန်ရေးကြီးကို ဆင်နွှဲဖို့ မလွယ်ဘူး။ ကျေးရွာတွေမှာ ပေးနေတဲ့ စစ်သင်တန်းတွေက တဆင့် တော်လှန်ရေးအင်အားတွေကို ကျစ်ကျစ်လျစ်လျစ် စုဆောင်းထားကြဖို့ လိုတယ်။ လုံခြုံရေးလဲ ဂရုစိုက်'
အတွင်းခန်းမှာ ဆွေးနွေးနေကြတာ ဆိုပေမယ့် ထရံတချပ်သာ ခြားသည်မို့ တဘက်ခန်းမှ ပြောဆိုသံများကို အေးမ တယောက် အတိုင်းသားကြားနေရပါသည်။ အသက် (၁၅) နှစ်အရွယ်၊ ကျေးတောသူတယောက်အနေနဲ့ နားလည်သည်လဲရှိ၊ နားမလည်သည်လဲရှိ။ သို့ပေမယ့် ဖက်ဆစ်ကို ဆန့်ကျင်ရမည် ဆိုသည့် အသိတရားကတော့ ဘ၀ပေးအသိ ဖြစ်နေခဲ့ပြီ။ ကျေးရွာသူ၊ ရွာသားများအပေါ်တွင် အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ကျနေသော ဖက်ဆစ်လူရမ်းကားများကို မြင်ရလေတိုင်း အေးမ ရင်ထဲတွင် နင့်နေအောင် ခံစားခဲ့ရသည်။
'သမီး။ အဖေ ခရီးထွက်စရာရှိတယ်။ အရာရာတိုင်းမှာ သတိရှိပါစေ။ အဖေနဲ့ ဆက်သွယ်ချင်ရင် ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ကို သွားလျှောက်'
အဖေတခု၊ သမီးတခု ဘ၀ပေမယ့် အဖေ့ခရီးကို အေးမ မတားဖြစ်။ တတိုင်းပြည်လုံး ဖက်ဆစ်လက်အောက်က လွတ်မြောက်ဖို့ အရေးမှာ မိသားစုအရေးအတွက် အဖေ့ကို နောက်ဆံ မတင်းစေချင်ပါ။
'လိုအပ်ရင် သမီးလဲ တိုက်ပွဲဝင်မယ် အဖေ။ သမီးအတွက် အဖေစိတ်ချပါ'
အဖေက အေးမကို တချက်စိုက်ကြည့်ပြီး၊ ချာကနဲလှည့်ကာ သူ့ရဲဘော်များနှင့်အတူ ထွက်ခွာသွားခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အဖေနဲ့ နောက်ဆုံးဆုံတွေ့ခဲ့ရတာမှန်း သူမကြိုမသိခဲ့ပါ။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလမှာ သူမတို့ နယ်ဘက်က ဖြတ်သွားသော ဂျပန်စစ်ကြောင်းကို တိုက်ခိုက်ရင်း ဂုဏ်ရောင်ပြောင်စွာ ကျဆုံးသွားခဲ့သည့် သတင်းကိုသာ တော်လှန်ရေးအပြီး ရွာကိုပြန်လာသော အဖေ့ရဲဘော်များထံမှ ကြားခဲ့ရပါတော့သည်။
အချိန်ကား - (၁၉၅၆) ခုနှစ်၊ မတ်လ။
'ငါတို့က ဒီတခါတော့ ပွဲပြီးပြီ ထင်တာကွ။ ကွန်မြူနစ်ပါတီကလဲ ၅၅လမ်းစဉ်ကို ချထားပြီ။ ပမညတကလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးတောင်းဆိုနေပြီ။ ဖဆပလက ဘာထကြောင်တာလဲ'
ကိုသာဒင်ရဲ့ စကားသံကြောင့် အေးမခေါင်းထောင်သွားမိသည်။ အေးမလဲ ဒီအဖြေကို ကြားချင်ပါသည်။ အေးမရဲ့ ငယ်ချစ်ဦး ကိုချစ်ဖေက ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီဝင်။ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆင်နွှဲဖို့ ထွက်သွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရွာသို့ တခါတရံသာ ပြန်ရောက်လာတတ်သည်။ အချစ်ရေးထက် စစ်ရေးကို အလေးပိုရမည့် အချိန်မို့ အတူနေဖို့ အရေးကို မတွေးဖြစ်ကြသေး။ အသက်တွေကသာ တစတစ ကြီးလို့လာနေသည်။
'အဲဒါပြောတာပေါ့ကွ။ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေး၊ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေး ၅၅ လမ်းစဉ်ကို ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ကွန်မြူနစ်ပါတီကိုကျတော့ လက်နက်ကိုင်ပုန်ကန်နေတဲ့ သောင်းကျန်းသူအဖွဲ့လို့ သမုတ်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်စဲရေးကို တောင်းဆိုနေတဲ့ ပမညတကိုကျတော့ မြေပေါ်ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့လို့ သမုတ်တယ်။ ဖဆပလကကျတော့ တတိုင်းပြည်လုံးမှာ သောင်းကျန်းရမ်းကားခဲ့တဲ့ ခါးပိုက်ဆောင်တပ်တွေကို ပျူစောထီးဆိုပြီး အမည်ပြောင်းဖွဲ့တယ်။ တရားဝင် လက်နက်ကိုင် ရမ်းကားခွင့်တွေ ပေးလိုက်တယ်။ ဒီနှစ်ဦးမှာပဲ အောင်မာဃ စစ်ဆင်ရေးကြီးကို စပြီး ဆင်နွှဲပြန်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းရေးအသံကို စစ်သံနဲ့ ဖုံးလွှမ်းပစ်လိုက်တာပဲ။ ဒါတွေကို ကြည့်ရင် ဖဆပလရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို တွေ့နေရပြီကွ။ ဖဆပလ လုပ်နေတာ ငြိမ်းချမ်းရေးမဟုတ်ဘူး။ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကို ခေါင်းမထောင်နိုင်အောင် ထိန်းချုပ်ပြီး သူတို့ အာဏာတည်မြဲရေးကို လုပ်နေတာပဲ'
'ဒါကြောင့်လဲ လာမယ့် ဧပြီလမှာကျင်းပမယ့် ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ 'ဖဆပလကြီး အနှစ်လေးဆယ် အာဏာတည်စေရမယ်' ဆိုတဲ့ ကြွေးကြော်သံကို ကြွေးကြော်ပြီး စည်းရုံးနေတာပေါ့။ ပြည်တွင်းစစ်ဘေး သင့်နေကြတဲ့ ပြည်သူတွေကိုမှ အားမနာပါးမနာကွာ။ အာဏာတည်မြဲရေး ကြွေးကြော်နေကြတာ'
'ငါကတော့ ပမညတရဲ့ ကြွေးကြော်သံကို ကြိုက်တယ်။ ပြည်တွင်းစစ်မုချ ရပ်စဲရမယ်လို့ ကြွေးကြော်ထားတာ။ ဒီအခြေအနေအတိုင်းဆိုရင် လူထုက ပမညတကိုပဲ မဲပေးမှာပဲကွ။ ပမညတပဲ နိုင်လိမ့်မယ်'
'မထင်နဲ့ကွ။ ဖဆပလက အာဏာရှိတဲ့ အစိုးရလေ။ သူတို့အာဏာစက်ရယ်၊ ပျူစောထီးတွေရယ်ကို သုံးပြီး ဖဆပလကိုယ်စားလှယ် အနိုင်ရရေးကို ကလိန်ကကျစ် လုပ်ကြမှာပဲ'
'ဒါဖြင့် စစ်တပ်ကကော ဘာလုပ်မယ်ထင်လဲ။ ကြားနေမယ်လို့ ပြောနေတယ် မဟုတ်လား'
'မထင်စမ်းပါနဲ့ကွာ။ စစ်တပ်မှာက ဆိုရှယ်လစ်အနွယ်ဝင်တွေ အများကြီးပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာကိုလဲ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေက လက်ခံချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးလို့ ကြားတယ်။ သူပုန်နဲ့ မဆွေးနွေးဘူး ဆိုတာမျိုးပေါ့ကွာ'
'တင့်လွင်ရေ။ မင်းကတော့ သတင်းစုံတယ်ကွာ။ တို့ရွာမှာ မင်းလို လူတယောက် ရှိနေလို့ နိုင်ငံရေးနဲ့ မျက်ချေမပြတ်ရတာ'
'ကျုပ်တို့ရွာက နိုင်ငံရေးနဲ့ မဝေးပါဘူး။ မျက်နှာဖြူကောင်တွေကို ချခဲ့တဲ့ လူတွေလဲရှိတာပဲ။ အေးမအဖေတို့လို ဖက်ဆစ်ကို အသက်ပေး ဆန့်ကျင်သူတွေလဲ ရှိတာပဲ။ ချစ်ဖေတို့လို ကွန်မြူနစ်တွေလဲ ရှိတာပဲ။ တင့်လွင်တို့လို မြို့ကို အရောက်အပေါက်များတဲ့ လူတွေလဲ ရှိတာပဲ'
အဖေ့အကြောင်း၊ ချစ်သူအကြောင်းတွေ ပြောကြတော့ အေးမ မျက်နှာလေး ငယ်သွားရသည်။ ကွန်မြူနစ်ပါတီက ငြိမ်းချမ်းရေး လမ်းစဉ်ချမှတ်သည် ကြားရတော့ အေးမမှာ ၀မ်းသာလိုက်သည်ဖြစ်ခြင်း။ အခုတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ တဘက်က လိုလားရုံနဲ့ မပြီးပဲ အခြားတဘက်ကပါ လိုလားမှသာ ရနိုင်သည့် အရာ ဆိုတာကို အေးမသဘောပေါက်သွားပါပြီ။
'ချစ်ဖေဆိုလို့ ဒီကောင်ကြီးကို သတိရလိုက်တာကွာ။ ခုဘယ်ရောက်နေလဲ မသိဘူး'
'အေးမပြောဖို့လဲ ထားပါဦးကွာ။ ဒီတခါ လာရင်တော့ တခါတည်းသာ လိုက်သွားတော့ အေးမရေ။ ခု ရွေးကောက်ပွဲမှာလဲ ဖဆပလပဲ နိုင်ချင်နိုင်သွားမှာ။ ဖဆပလသာ နိုင်သွားရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ဝေးပြီ။ နင်တို့လဲ နီးတော့မှာ မဟုတ်ဘူး'
'ကိုအေးနိုင်ကြီးကလဲတော်။ ပါးစပ်ပုပ်ကြီးနဲ့ မပြောပါနဲ့။ အေးမလဲ ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါပြီ။ ဒီတခါ သူလာရင်တော့ တခါတည်းပဲ လိုက်သွားတော့မယ်'
ငြိမ်းချမ်းရေး မလိုလားတဲ့ ကြေးစားစစ်သားတွေနဲ့ တိုက်ပွဲဝင်ရင်း ကျဆုံးသွားသည်မို့ ကိုချစ်ဖေတယောက် ဘယ်တော့မှ ပြန်လာတော့မည် မဟုတ်သည်ကိုသာ အေးမ ကြိုသိနိုင်ခဲ့ပါလျှင်။
အချိန်ကား- (၁၉၇၄) ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၆) ရက်။
နေရာကား- ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တနေရာ။
'အေးမရေ။ ဒီနေ့ည ငါ့ကို မမျှော်နဲ့။ ငါပြန်လာချင်မှ ပြန်လာမှာ'
'ဘာဖြစ်လို့လဲ ကိုသာဒင်ရယ်။ မထိတ်သာ မလန့်သာ ရှိလိုက်တာ'
အိမ်ထောင်ဦးစီး လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက ပြောလာတာမို့ အေးမ လန့်သွားရသည်။ ငယ်ချစ်ဦးနှင့် လွဲခဲ့ရပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ရွာမှ ကိုသာဒင်နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့သည်။ ကလေးလေး တယောက်ရလာတော့ ကိုသာဒင်က သားလေးရှေ့ရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့ကြီးကို ပြောင်းမည်ဆိုသည်။ ဒီလိုနဲ့ ရန်ကုန်ရောက်လာတော့ လက်လုပ်လက်စားဘ၀မှာ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားကြရင်း ကိုသာဒင်က ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်းမှာ အလုပ်ရသည်။ နိုင်ငံရေးနဲ့ မျက်ချေမပြတ်သူမို့ အလုပ်သမားအကြားတွင် ကိုသာဒင်ရဲ့ အမည်က ရေပန်းစားသည်။ အေးမတို့ရဲ့ တဲအိမ်လေးမှာ လာစုရင်း အလုပ်သမားအခွင့်အရေး ဆိုတာတွေကို ပြောဆိုတတ်ကြသည်။ အသေးစိတ်ကို နားမလည်ပေမယ့် တနေ့တခြား ကျပ်တည်းဆင်းရဲနေတဲ့ လက်တွေ့ဘ၀မှာ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အခွင့်အရေးတချို့ ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့ အေးမ နားလည်နေမိပါသည်။ အခုတလော ကိုသာဒင်တို့ ပြောနေတဲ့ မြစ်ငယ်မီးရထား စက်ခေါင်းပြင်စက်ရုံက အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှု ဆိုတာတွေ၊ ရေနံမြေအလုပ်သမား လှုပ်ရှားမှု ဆိုတာတွေများ ရန်ကုန်ကို ကူးစက်လာလေ့ရော့သလား။
'တော် အိမ်မပြန်လာမှာ ဟိုကိစ္စတွေနဲ့များ ဆက်စပ်နေသလားဟင်'
လင်ယောက်ျားဖြစ်သူအား မရဲတရဲနှင့် မေးမိသည်။
'ဟိုကိစ္စတွေလေ။ တော်တို့ ပြောနေတဲ့ အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှု ဆိုတာတွေ'
'ဟုတ်တယ်အေးမ။ မနေ့တုန်းက ရန်ကုန်က မီးရထားအလုပ်သမားတွေ အင်းစိန်ဘက်ကို ချီတက်သွားကြတယ်လို့ သတင်းကြားရတယ်။ တို့သင်္ဘောကျင်းထဲမှာ ဒါပဲ ပြောနေကြတာပဲ။ ဒီနေ့တော့ တခုခုထူးမှာသေချာတယ်။ သပိတ်ဖြစ်လာရင် ငါလဲ ၀င်ပါမယ်။ အလုပ်သမားတွေ ဆုံးရှုံးနေတဲ့ အခွင့်အရေးတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့ည ငါအိမ်ပြန်လာချင်မှ လာမယ်လို့ ပြောတာ'
'ရပါတယ်တော်။ အများအတွက် အရေးပဲ။ အေးမ အားပေးပါတယ်။ သားရေ။ မောင်အေးချမ်း။ သားအဖေအလုပ်သွားတော့မယ်။ လာနှုတ်ဆက်လိုက်ဦး'
ဘာလိုသဘောကြောင့် ဒီလိုတွေ လုပ်ဖြစ်ခဲ့တာမှန်း အေးမ မသိပါ။ သို့ပေမယ့် အိမ်ထဲမှာ အိပ်နေသော သားလေးကို နံနက်အစောကြီးနှိုးပြီး အဖေကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ပြောဖြစ်ခဲ့တာတော့ သေချာသည်။
ကိုသာဒင်ထွက်သွားတော့ အေးမလဲ တနေ့တာအတွက် ပြင်ဆင်ရသည်။ တောရွာကတက်လာပေမယ့် မြို့ရောက်တော့လဲ မြို့နဲ့အညီ လှုပ်ရှားရုန်းကန်ရပြီ။ ယောက်ျားလုပ်စာ နဲ့တင် အိမ်အတွက် မဖူလုံတော့။ ဒါကြောင့် ဈေးထဲသွားပြီး စက်ချုပ်ဆိုင်များမှ လက်ချုပ်ထည်များကို လိုက်ကောက်ပြီး အိမ်မှာ တနိုင်တပိုင် အလုပ်လုပ်ရသည်။ ဒီနေ့တော့ အင်းစိန်ဈေးထဲက ယူလာသော ချုပ်ထည်များကို လက်စသပ်ပြီး ပြန်သွားပို့ရမည်။
နေ့လည်ပိုင်းတွင် ဈေးသို့သွားမည်ဆိုပြီး ထွက်လာသော အေးမတယောက်မှာ ဈေးသို့မရောက်။ အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် လျှံကျနေသော ကြွေးကြော်သံများက အေးမစိတ်တို့ကို ဆွဲညှို့ယူသွားသည်။
ဆန်လုံလောက်စွာ ရရှိရေး - ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး
လုပ်ခွင်သက်သာချောင်ချိရေး- ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေး - ဒို့အရေး၊ ဒို့အရေး
အလုပ်သမားကောင်စီ- ဖျက်သိမ်းပေး၊ ဖျက်သိမ်းပေး
အလုပ်သမားထုကြီး၏ ညီညီညာညာ တောင်းဆိုလိုက်သော ကြွေးကြော်သံများက အင်းစိန်လမ်းမကြီးပေါ်တွင် လျှံကျလို့နေသည်။
အေးမရောက်နေသော နေရာနှင့် အနီးဆုံးမှ စက်ရုံရှေ့သို့သွားကြည့်လိုက်မိသည်။ သမိုင်းချည်မျှင်နှင့် အထည်စက်ရုံ။
စက်ရုံထဲမှ အလုပ်သမားများက ဂိတ်ဝမှနေပြီး သပိတ်တရားများဟောနေကြသည်။ လူများကလဲ ကြိတ်ကြိတ်တိုး စည်ကားနေသည်။ အလုပ်သမားကြီးတယောက်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်း ထမင်းငတ်နေရသောဘ၀မှာ ဆန်လုံလောက်စွာရဖို့ တောင်းဆိုနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောနေတာကို ကြားရတော့ မိသားစုအားလုံး ၀၀လင်လင်စားဖို့ ဘယ်တော့မှ အလုံအလောက် မရှိနေသော အိမ်မှ ထမင်းအိုးလေးကို သွားသတိရမိသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးကို တောင်းဆိုသော အလုပ်သမားများရဲ့ ကြွေးကြော်သံများကိုလဲ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ထောက်ခံလိုက်မိသည်။ တယောက်ပြီးတယောက် သပိတ်တရားတက်ဟောသူများကို ကြည့်နေမိရင်း ကိုသာဒင်ကို သတိသွားရမိပြန်သည်။ ကိုသာဒင်လဲ ဆင်မလိုက်သင်္ဘောကျင်းမှာ ဒီလိုပဲ တရားတက်ဟောနေပြီလား မသိ။
'ဟဲ့။ ဟိုမှာ စစ်ကားတွေ လာနေကြပြီတော့'
မြို့ထဲဖက်က စစ်ကားတွေ တန်းစီဝင်လာကြတာမို့ လူထုထဲ တယောက်တပေါက် ပြောနေကြသံတွေ ထွက်လာသည်။ ရှေ့ဆုံးကားပေါ်မှ စစ်သားများက ကြေးစားစစ်သားများပီပီ ခံစားချက်မပါသော ကျောက်ရုပ်မျက်နှာများဖြင့် ကားပေါ်မှ တဖွဲဖွဲ ဆင်းလာကြသည်။ အသင့်အနေအထားနဲ့ လှံစွပ်တပ်သေနတ်များကို ကိုင်ပြီး ရင်ဘောင်တန်း ရပ်နေကြပေမယ့် လူထုကြီးက နောက်ဆုတ်မသွား။ အလုပ်သမားခေါင်းဆောင်ရဲ့ သပိတ်တရားသံများကို ဆက်လက်နားစွင့်နေကြသည်။
ပြည်သူ လူထုကြီးနဲ့ အလုပ်သမားထုတို့ တသားတည်း ဖြစ်သွားသည်။ အန္တရာယ်အနံ့ကို ရနေပေမယ့် အေးမတယောက် ဆက်ပြီး ရပ်နေမိသည်။ လူအုပ်ကြီးကလဲ တစထက်တစ ပိုပြီး များလာသည်။
မကြာပါ။ လှိုင်ရဲစခန်းထဲက ပုလိပ်တွေ ထွက်လာပြီး အေးမတို့ လူအုပ်ကြီးကို ဘယ်ညာဝင်ရိုက်တော့တာကြောင့် အားလုံးဝရုန်းသုန်းကားတွေ ဖြစ်ကုန်သည်။ သေနတ်နှင့် ပစ်သံများလဲ ကြားရသည်။ သူမနားက လူအုပ်ကြီးကတော့ ဆောက်လက်စတိုက်က အုတ်နီခဲတွေကောက်ပြီး စစ်သားတွေကို ပြန်ပစ်ကြသည်။
ရုတ်ရုတ်သဲသဲကြားမှာ ပြေးရင်းလွှားရင်း ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးကာလကို အေးမ ပြန်သိရသွားမိသည်။ တကယ်ဆို ဒီကြေးစားစစ်သားတွေဟာ ဖက်ဆစ်လူရမ်းကားတွေထက်တောင် ပိုပြီး ယုတ်မာ မိုက်ရိုင်းသေးတာပဲ။ လက်နက်မဲ့ ပြည်သူလူထုကြီးများကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ကြရတယ်လို့။ မြန်မာပြည်သူလူထုကြီးဟာ လူမျိုးခြားဖက်ဆစ်တွေကိုတောင် ရရာလက်နက်စွဲပြီး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ တော်လှန်ခဲ့ကြသေးတာပဲ။ ဘာဖြစ်လို့များ ကိုယ့်အမျိုးသားထဲကနေ အသားထဲက လောက်ထွက်သလို ပေါ်လာတဲ့ ဖက်ဆစ်ကြေးစားစစ်သားတွေကိုကျမှ တမျိုးသားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့ ရရာလက်နက်စွဲပြီး မတော်လှန်ကြရသေးတာလဲ။ ပြေးရင်းလွှားရင်း တွေးနေမိသည်။
ကိုသာဒင်အတွက်လဲ စိတ်ပူမိသည်။ သင်္ဘောကျင်းဘက်မှာကော ဘာတွေ ဖြစ်နေပြီလဲ မသိ။ ကိုသာဒင် အိမ်ပြန်လာတဲ့နေ့ကျတော့မှပဲ အကြောင်းစုံ မေးရပေတော့မည်။
ကိုသာဒင့် ပြန်အလာကို အေးမစောင့်မျှော်နေမိသည်။ သို့ပေမယ့် ကိုသာဒင်ကား ပေါ်မလာခဲ့။ ကိုသာဒင့် သူငယ်ချင်းတယောက်သာ ရောက်လာသည်။ အေးမသိချင်သော သင်္ဘောကျင်းက အလုပ်သမားလှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုလဲ သူကပဲ ပြောပြခဲ့ပါသည်။
'မထင်ထားဘူး မအေးမရာ။ ဒီလောက်ရက်စက်လိမ့်မယ်လို့။ လက်နက်မဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ကွန်မင်ဒိုတပ်တွေနဲ့ ၀င်စီးပြီး ပစ်သတ်ကြတာ။ သင်္ဘောကျင်းက လမ်းတွေပေါ်မှာ သွေးတွေ စွေးစွေးနီနေတာပဲ။ ကိုသာဒင်ကြီးက အလုပ်သမား ရဲဘော်ကောင်း တယောက်ပါဗျာ။ ဒီသပိတ်တိုက်ပွဲမှာ အသက်စွန့်ပြီး ပါဝင်သွားခဲ့တယ်'
အေးမရဲ့ မျက်ဝန်းမှ မျက်ရည်တသွင်သွင် စီးကျလာရုံမှတပါး ဘာများ ပြောနိုင်ပါဦးမည်နည်း။
အချိန်ကား- ၁၉၈၈ခု၊ အောက်တိုဘာလ
'အမေ။ ကျွန်တော် တောခိုတော့မယ်'
စက်တင်ဘာလမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ရှစ်လေးလုံးပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကြီးကို ဖြိုခွင်းပြီးကတည်းက သားဆီက ဒီလို စကားသံကြားရတော့မယ်ဆိုတာ သူမသိနေခဲ့သည်။ သားနဲ့ ချွေးမတို့ တိုးတိုးကြိတ်ကြိတ်စကားတွေ ပြောနေကြတာကိုလဲ ရိပ်မိသည်။
ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာ သားက လုပ်သားကောလိပ် တက်နေဆဲ။ ရုံးတရုံးမှာ အောက်တန်းစာရေး ၀င်လုပ်ရင်း မိသားစုတာဝန်ကို ထမ်းနေပေမယ့် ပညာရေးကိုလဲ ဆက်ကြိုးစားနေသည့် လုပ်သားကျောင်းသား။ သားရဲ့ ပါရမီဖြည့်ဘက် ဇနီးသည်လေးကလဲ ယောက်ျားဖြစ်သူရဲ့ ပညာရေးကိုပါ အားပေးသည်။ စက်ချုပ်ရင်း မိသားစုရဲ့ ၀န်ကို တဘက်တလမ်းကနေ ၀ိုင်းထမ်းပေးခဲ့သည်။
အရေးတော်ပုံကြီး ဖြစ်လာတော့ ယုံကြည်ချက်တူ၊ ခံစားချက်တူကြသည့် ပွင့်တူရွက်တူများဖြစ်သည်မို့ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံး တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့ကြသည်။ လင်ယောက်ျားဖြစ်သူက အရေးတော်ပုံက မွေးဖွားပေးလိုက်သည့် အလုပ်သမားသမဂ္ဂ၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှာ ချိတ်ဆက်လက်တွဲရင်း တော်လှန်ရေးတာဝန် ထမ်းဆောင်နေချိန်တွင် ဇနီးသည်ကလဲ အိမ်ရဲ့ စားဝတ်နေရေး အခြေအနေကို တဘက်က ထိန်းကျောင်းရင်း အိမ်ရှင်မများ သမဂ္ဂ တခုတွင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အရောင်အသွေးစုံဖြင့် လူထုတိုက်ပွဲ အထွေထွေသပိတ်ကြီးအတွင်းမှာ စီးမျောလာခဲ့သော သမဂ္ဂများမှာလဲ အစုံအလင်။ လူထုတရပ်လုံး လက်တွဲပြီး သွေးမုန်တိုင်းထဲမှာ စီးမျောခဲ့ကြသည်။ စနစ်ဆိုးကို တိုက်ဖျက်ခဲ့ကြသည်။
'သား၊ ဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။ အမေက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးဆိုတဲ့ ခရီးကြမ်းကို မဖြတ်ခဲ့ဖူးပေမယ့် ဖြတ်သန်းခဲ့သူတွေရဲ့ အနီးဆုံးမှာ ရှိနေခဲ့ဖူးတယ်။ ပင်ပန်းမယ်၊ ဆင်းရဲမယ်။ လိုအပ်ရင် အသက်စွန့်ရလိမ့်မယ်'
'သားဆုံးဖြတ်ပြီးပြီ အမေ။ လူထုတိုက်ပွဲတခုတည်းနဲ့ ဒီစစ်ခွေးတွေကို နိုင်အောင် မတိုက်နိုင်ဘူးဆိုတာ သားသိသွားပြီ။ လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကို ဟန်ချက်ညီ ပေါင်းစပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားကြရမယ်'
သားဆီက ခိုင်မာသော ဆုံးဖြတ်ချက် စကားသံကို ကြားရပြီးချိန်မှာ ချွေးမ မျက်နှာကို လှမ်းကြည့်မိသည်။
'သမီးရဲ့ သဘောကကော။ သားရဲ့ ရင်သွေးလေးကိုလဲ သမီးလွယ်ထားရတယ် မဟုတ်လား။ မိသားစု တာဝန်ကို မကျေပြွန်နိုင်တော့မယ့် ခင်ပွန်းသည်တယောက်ကို သမီးရဲ့ စိတ်ထဲက ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ရှိနေနိုင်ပါ့မလား။ အမေ့မြေးလေး ကြီးပြင်းလာချိန်ကျမှ မင်းအဖေ တာဝန်မကျေဘူးလို့ ပြောဆိုမှာကို အမေစိုးရိမ်မိတယ်'
'အမေရယ်။ ကိုအေးချမ်းက မိသားစုတာဝန်ကို မယူချင်လို့ ရှောင်ဖယ်စွန့်ခွာသွားတာမှ မဟုတ်တာပဲ။ မိသားစုအရေးထက် ပိုပြီး အရေးကြီးတဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေးတာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ဖို့ ထွက်ခွာသွားတာပဲ။ သမီးကျေနပ်တယ် အမေ။ အများမိုးခါးရေသောက်တိုင်း လိုက်မသောက်ပဲ ရေကြည်တပေါက် အများကို တိုက်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းမယ့် ခင်ပွန်းသည်ကို သမီးရွေးချယ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီအတွက်လဲ သမီးဟာသမီး ကျေနပ်တယ်။ မွေးလာမယ့် ကလေးလေးကိုလဲ တကိုယ်ရေဘ၀ တိုးတက်ရေးအတွက် တော်လှန်ရေးလမ်းကြောင်းကို စွန့်ခွာရှောင်ဖယ်တာမျိုး မလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖခင်ရဲ့ လုပ်ရပ်အပေါ် ဂုဏ်ယူနားလည်တတ်တဲ့ ကလေးလေးဖြစ်လာအောင် သမီး လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးမယ်'
သားနဲ့ ချွေးမကို ကြည့်ပြီး ဒေါ်အေးမ အားရလှသည်။ ဘ၀တလျှောက်လုံးမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ ဖက်ဆစ်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး တိုက်ပွဲ၊ လူတန်းစားတိုက်ပွဲ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးထဲက တိုက်ပွဲ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲအဆက်ဆက်မှာ ဖခင်၊ ချစ်သူ၊ လင်ယောက်ျားတို့ရဲ့ အသက်တွေကို စတေးခဲ့ရပြီးပြီ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သားတယောက်ကျန်သေးသည်။ မပြီးသေးတဲ့ တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်းတွေပေါ်က တိုက်ပွဲဝင်အလံကို သားက ဆက်ပြီး သယ်ဆောင်ပေလိမ့်ဦးမည်။
အချိန်ကား- ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ
တသက်နဲ့တကိုယ် သာယာဝတီထောင်သို့ လာရလိမ့်မည်ဟု ဒေါ်အေးမ တခါမှ မတွေးခဲ့မိ။ လယ်သမားခေါင်းဆောင် ဆရာစံကို နယ်ချဲ့တွေက ကြိုးပေးသတ်ခဲ့တဲ့ ထောင်၊ ပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ တော်လှန်ရေးသမားပေါင်းများစွာကို ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခဲ့တဲ့ထောင်။
အခုတော့ ဒီလို သမိုင်းအစဉ်အလာရှိတဲ့ သာယာဝတီထောင်ကို သူမလာခဲ့ရပြီ။ ဒီထောင်ထဲမှာ သူမရဲ့ ချွေးမ မ၀င်းမာကို စစ်အစိုးရက ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည်မှာ နှစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ ရှစ်လေးလုံးအထိမ်းအမှတ်စာ ဖြန့်ဝေမှု၊ တောတွင်း အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်မှုတဲ့။ ရန်ကုန်မြို့၊ ဆင်ခြေဖုန်း ရပ်ကွက်က သူမတို့ တဲအိမ်လေးကို ရှေ့တန်းက သူပုန်စခန်း တခုနှယ် လက်နက်ကိုင်စစ်သားများနဲ့ လာဝိုင်းပြီး မ၀င်းမာကို လာဖမ်းသွားခဲ့ကြသည်။ ဒီတုန်းက မြေးလေးက ကိုးနှစ်အရွယ်လေးပဲ ရှိသေးသည်။ အမေကို လာဖမ်းသည့် ကြေးစားတွေကို မဖမ်းဖို့ ဒူးထောက်ငိုယို တောင်းပန်နေသည့် ကလေးငယ်လေးရဲ့ ရင်ဝကို စစ်ဖိနပ်နှင့် ဆောင့်ကန်သွားခဲ့သည့် ဒီမြင်ကွင်းကို ဒေါ်အေးမ ရင်ထဲက ဘယ်လို ဖျောက်ရမည်မှန်းပင် မသိ။
မြေးလေးနဲ့အတူ ဘ၀ကို ဆက်ရုန်းကန်ဖို့ အရေး ဈေးတောင်းခေါင်းပေါ်ရွက်ရသည်။ အသက်ခြောက်ဆယ်ကျော်အရွယ် ဇရာရဲ့ ဖိထောင်းခြင်းဒဏ်ကို ဒေါ်အေးမ ဂရုမစိုက်နိုင်ပါ။ မြေးလေးကို ကျောင်းထားဖို့အရေး၊ ထမင်းနပ်မှန်ဖို့အရေး၊ ချွေးမလေးကို ထောင်ဝင်စာ ပုံမှန်သွားတွေ့ဖို့ အရေး တွေအတွက် ကျားကုတ်ကျားခဲ ကြိုးစားရုန်းကန်ရတော့သည်။ သို့ပေမယ့် ဒေါ်အေးမ အားမလျှော့ပါ။ အားမလျှော့သေးသရွေ့၊ မျှော်လင့်ချက်ရှိနေသေးသရွေ့ ဘယ်တော့မှ မရှုံးသေးဘူးလို့ ငယ်ချစ်ဦး ကိုချစ်ဖေက အကြိမ်ကြိမ်၊ အခါခါ ပြောခဲ့ဖူးသည်။ စနစ်ဆိုး၊ခေတ်ဆိုးက ဘယ်လောက်ပဲ နှိပ်စက်ကလူပြုပြု၊ ဒေါ်အေးမ လုံးဝ အားမလျှော့။ ထောင်ဝင်စာ ပုံမှန်တွေ့နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့သည်။
ဒီကြားထဲမှာမှ သမီးလေးလို ချစ်ရသော ချွေးမလေးကို အင်းစိန်ထောင်မှ သာယာဝတီထောင်သို့ ပြောင်းလိုက်ကြပြန်သည်။
ခရီးက ဝေးသွားပေမယ့် သမီးလေး အားမငယ်စေရ။ ထောင်ဝင်စာသွားတွေ့ဖို့ ခက်သွားပေမယ့် မဖြစ်၊ ဖြစ်အောင် သွားဖို့ ကိုတော့ ခြစ်ခြုတ်ပြီး ပိုက်ဆံစုရသည်။
'ဒုက္ခခံလို့ အမေရယ်၊ ဒီအထိများ လိုက်လာရတယ်လို့'
'အမေမပင်ပန်းပါဘူး သမီးရယ်။ ပိန်သွားလိုက်တာကွယ်။ နေထိုင်ကောင်းရဲ့လား'
အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ပိတ်လှောင်ချုပ်နှောင်ခံနေရသော သမီးလေးကို အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တော့ ဒေါ်အေးမ မေးမထွက်ရက်ပါ။ မွဲခြောက်ခြောက် အသားအရေ၊ ခန္ဓာကိုယ် ခပ်ပိန်ပိန်က သက်သေပြနေခဲ့ပြီပဲ။ ဒါပေမယ့် သမီးလေးရဲ့ မျက်လုံးလေးတွေကိုတော့ ဒေါ်အေးမ အားရသည်။ ဒီမျက်ဝန်းလေးတွေထဲမှာ အနိုင်မခံ၊ အရှုံးမပေးလိုတဲ့ စိတ်အားမာန်တွေ၊ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရှိနေဆဲ။
'သမီးအတွက် စိတ်မပူပါနဲ့ အမေ။ သားလေးရော နေကောင်းရဲ့လားဟင်'
'မြေးလေးက နေကောင်းပါတယ်။ ကျောင်းစာလဲ ကြိုးစားတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုသာ ဂရုစိုက်နော်သမီး'
ရတဲ့ အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ စကားလေးတွေ ပြောဖြစ်ကြသည်။ သို့ပေမယ့် ထောင်ဝင်စာမှာ ယူလာတဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေထဲမှာ မြေးလေးရဲ့ ကျောင်းအားရက် စပယ်ပန်းကုံး ရောင်းရင်း စုထားတဲ့ ပိုက်ဆံလေးတွေနဲ့ ၀ယ်ထည့်ပေးထားတဲ့ ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်လေးတွေပါ ပါလာတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဒေါ်အေးမ ပြောမပြရက်ခဲ့ပါ။
တယောက်အပေါ် တယောက်က ညှာတာရင်း ပြောမထွက်ခဲ့သော စကားတချို့ကလဲ ရှိနေပါသေးသည်။ ဒေါ်အေးမကလဲ ချွေးမကို မြင်တွေ့ရတော့ သားမောင်ကို သတိရသလို၊ မ၀င်းမာကလဲ ကိုအေးချမ်းကို သတိရနေခဲ့ပါသည်။ သို့ပေမယ့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မှာစိုး၍ ကိုအေးချမ်းအကြောင်းကို ချန်ရစ်ထားခဲ့ကြသည်။
ပြည်သူလူထုကို ရန်သူလို သဘောထားသော စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တော်လှန်ရင်း တနင်္သာရီစစ်ဒေသမှာ ကိုအေးချမ်း ကျဆုံးသွားခဲ့ပြီဆိုတာကို ထောင်မကျခင်ကတည်းက တော်လှန်ရေးအဆက်အသွယ်များမှ တဆင့် မ၀င်းမာက သိနေခဲ့ပြီးသားပေမယ့် ဒေါ်အေးမကို ဖွင့်မပြောဖြစ်ခဲ့။ ဖခင်၊ ချစ်သူနဲ့ ခင်ပွန်းသည်တို့တုန်းက အတွေ့အကြုံတွေက ဘ၀နဲ့ ရင်းပြီး ရှိခဲ့သူမို့ သားဖြစ်သူရဲ့ အပြန်ခရီးကိုလဲ မ၀ံ့မရဲ ဖြစ်နေမိတာကို ဒေါ်အေးမကလဲ မ၀င်းမာကို ဖွင့်မပြောဖြစ်ခဲ့။
နောက်ဆုံးတော့ အချိန်စေ့ပြီမို့ ဖွင့်မပြောဖြစ်သော ရင်ထဲက စကားသံလေးများကို ကိုယ်စီသိမ်းဆည်းရင်း လမ်းခွဲဖြစ်ခဲ့ကြပြန်သည်။
နောက်တကြိမ်ပြန်မဆုံနိုင်တော့မယ့် မမြင်နိုင်သော ကံကြမ္မာအချိုးအကွေ့တခုက လက်တကမ်းမှာ စောင့်ကြိုနေပြီ ဆိုတာကိုတော့ ကြိုမသိခဲ့ကြ။
သာယာဝတီသို့ နောက်တခေါက်ထပ်သွားနိုင်ရန် မြေးအဖွားနှစ်ယောက် ပိုက်ဆံစုနေကြဆဲမှာပင် အသည်းရောင်အသားဝါ ရောဂါဖြင့် ထောင်ထဲတွင် ကွယ်လွန်သွားသော မ၀င်းမာ၏ သတင်းဆိုး အကြောင်းကြားချက်ကို မျက်ရည်စက်လက်ဖြင့် လက်ခံလိုက်ကြရပါတော့သည်။
အချိန်ကား- ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၇) ရက်
အိပ်မောကျနေရာမှ နိုးလာသော မြေးလေးကို မေးမိသည်။
'ဟင်။ အဖွားက အစောကြီး နိုးနေတာလား'
အတိတ်အတွေးများနှင့် တညလုံး ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်ခဲ့တာကို မြေးလေးကို ပြောမပြဖြစ်တော့။
'မူးတုန်းပဲ အဖွား။ ဒါပေမယ့် ကိစ္စမရှိပါဘူး။ သားဈေးရောင်းသွားလိုက်ဦးမယ်'
'မဟုတ်တာပဲ မြေးလေးရယ်။ တရက်တလေလေး နားလိုက်ပါကွယ်။ ရှိတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ့ အဖွားစားတတ်ပါတယ်။ ညက မြေးလေးပေးတဲ့ ပိုက်ဆံလေးနဲ့ ငါးပိလေး သွားဝယ်ဦးမယ်'
မြေးလေးက ကမန်းကတန်းထပေမယ့် ခေါင်းမူးလို့လားမသိ။ ပြန်ယိုင်သွားသည်။
မြေးလေး နေမကောင်းသည်မို့ အဖွားအမြန်ထွက်လာလိုက်သည်။ ခြေလှမ်းများကတော့ နှေးကွေးလေးလံလို့နေသည်။
ရပ်ကွက်ထဲက ကုန်ခြောက်ဆိုင်လေးမှာ ငါးပိလေးဝယ်ပြီး အဖွား ပြန်လာခဲ့သည်။ ညက မစားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ထမင်းလေးကို ငါးပိနဲ့ လွေးလိုက်ရပေမယ့် စားလို့သိပ်မ၀င်လှ။ မြေးလေးအတွက် စိုးရိမ်လို့နေသည်။ ညနေကျရင်တော့ ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးခန်းလေးကို ခေါ်သွားရမည်။
ပိုက်ဆံဆိုသော အတွေးလေးက ခေါင်းထဲသို့ ဖြတ်ကနဲ တိုးဝင်သည်။
'မြေးလေး၊ အိမ်မှာပဲ နေနော်။ အဖွား ပြန်လာခဲ့မယ်'
'သင်္ကန်းကျွန်းက မြေးလေး အဖေရဲ့ သူငယ်ချင်း အိမ်ကိုပါကွယ်။ အဖွားမကြာပါဘူး'
သားရှိတုန်းကတည်းက အိမ်ကို ၀င်ထွက်နေကျ သူငယ်ချင်းတယောက်က အဖွားတို့ မြေးအဘွားကို စောင့်ရှောက်ပေးသည်။ ဆေးဖိုးဝါးခများ ပံ့ပိုးပေးသည်။ ခုလဲ မြေးလေး ကိစ္စ ပြောပြရင် ကူညီမှာပဲလို့ အဖွားတွေးမိသည်။
ဘတ်စ်ကားတတန်၊ ကုန်ကြောင်းတတန်ဖြင့် သင်္ကန်းကျွန်းဘက်ရောက်လာတော့ အဖွားရဲ့ မြင်ကွင်းထဲသို့ မယုံကြည်နိုင်ဖွယ် ကောင်းလိုက်အောင် ထူးခြားသော မြင်ကွင်းများက တိုးဝင်လာသည်။
ဆင်းရဲခပ်သိမ်း - ငြိမ်းကြပါစေ
သံဃာတော်များက မေတ္တာပို့ရင်း စီတန်းလမ်းလျှောက်နေသည်ကို ပြည်သူများကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်နေကြသည်။
ဆိုသော ကြွေးကြော်သံများကလဲ ထွက်ပေါ်လာသည်။
အဖွားမနေနိုင်တော့။ လူထုကြီးနဲ့အတူ ဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းမှာ ပါဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ ဆန္ဒပြပွဲပြီးမှ သားသူငယ်ချင်း မောင်မြင့်သူ အိမ်ကိုသွားမည်။ ညနေဆေးခန်းဖွင့်ချိန်အမှီ အိမ်ကို အရောက်ပြန်မည်ဟု စဉ်းစားလိုက်သည်။
'လာ၊ အဖွားလာ။ ဟေ့- အဖွားကို တွဲကြ'
လူထုကြီးက အဖွားကို လက်တွဲဖေးမကြသည်။ လူငယ်လေးများက ကူတွဲချီမသွားသည်မို့ တပ်ဦးအနီးသို့ အဖွားရောက်သွားသည်။
လေးထောင့်ကန်လမ်းမပေါ်မှာ လူထုဆန္ဒပြစစ်ကြောင်းကြီးနှင့် စစ်သားများ၊ လုံထိန်းများ ထိပ်တိုက်တွေ့ကြသည်။
စစ်သားများ၊ လုံထိန်းများက အာဏာရှင်လက်ကိုင်ဒုတ်များပီပီ နံပါတ်တုတ်များဖြင့် လူထုကြီးကို ၀င်ရိုက်ကြသည်။
ဖရိုဖရဲ အခြေအနေမှာ လူအများကြား ရောက်နေသော အဖွားကို ထမ်းပြေးဖို့ အော်နေကြသံ ကြားရသည်။ အော်နေသံများဘက်သို့ သွားဖို့ ခြေလှမ်းပြင်စဉ်မှာ ခါးမှာ တချက်၊ ခေါင်းမှာ တချက် နံပါတ်ဒုတ်နှင့် ရိုက်တာကို ခံလိုက်ရသည်။ နံပါတ်ဒုတ်ချက်များက ဆက်ကျလာသည်မို့ အဖွားလဲပြိုသွားသည်။
'အဖွားကြီးကို ရိုက်နေပြီ။ လုပ်ကြပါဦး။ ဟေ့ကောင်တွေ။ မင်းတို့ လူမဟုတ်ဘူးလားကွ။ တိရစ္ဆာန်ကောင်တွေ။ စစ်ခွေးတွေ'
စစ်သားများက အော်နေသူများထံသို့ ပြေးဝင်သွားပြန်သည်။ လူငယ်တချို့က စစ်သားများအလစ်မှာ အဖွားကို ၀င်ဆွဲပြီး ထမ်းပြေးကြသည်။
'သတိထားအဖွား။ ကျွန်တော်တို့တွေ အဖွားကို ဆေးရုံပို့ပေးမယ်'
စစ်သားများ မလိုက်လာသော နေရာရောက်တော့ လူငယ်လေးများက အဖွားကို မြေပေါ်အသာချပေးရင်း ပြောကြသည်။
မျက်လုံးများကို အားယူပြီး ဖွင့်ကြည့်မိတော့ မြေးလေးတို့အရွယ် လူငယ်လေးများကို တွေ့ရသည်။
လူငယ်လေးများရဲ့ မျက်နှာများပေါ်က ရဲရင့် ပြတ်သားသော ပုံရိပ်များ၊ မျက်လုံးများထဲက နာကျည်းရိပ်များကို သတိထားကြည့်မိရင်း ခင်ပွန်းသည် ကိုသာဒင် အကြိမ်ကြိမ် ရွတ်ဆိုခဲ့သော စာရေးဆရာ ဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ စကားလုံးလေးများကို သွားသတိရမိသည်။
လူတယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပုခုံးပေါ် တင်ပေးလိုက်တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက်သယ်ပိုးထမ်းရွက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ
ဒီစကားလုံးလေးများကို အဖွားကြိုးစားပြီး တလုံးချင်း ပြန်ရွတ်သည်။
အဖွားကို ရင်ခွင်ထဲ ပွေ့ထားသော လူငယ်လေးတယောက်ကို လှမ်းမေးမိသည်။
လူငယ်လေးက မျက်ရည်များကြားမှ ပြုံးလိုက်သည်။
လူငယ်လေးရဲ့ တိုးသဲ့သဲ့ အသံလေးအောက်မှာ အဖွားမျက်လုံးများ မှိတ်သွားသည်။
ဖက်ဆစ်စနစ် တိုက်ဖျက်ရေး တိုက်ပွဲ၊ လူတန်းစားတိုက်ပွဲ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးထဲက တိုက်ပွဲ၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲစဉ်တွေ ပြည့်လျှံနေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ ဖြတ်သန်းကျော်လွှားရင်း၊ ခေတ်ကြီးက ပုခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက်သော သမိုင်းတာဝန်တွေကို သယ်ဆောင်ထမ်းပိုးရင်း ကြယ်နီတပွင့်ကတော့ လွင့်ကြွေသွားခဲ့ပြီ။
သို့ပေမယ့် ဒီလိုကြယ်နီပွင့်တွေကလဲ သူမနံဘေးမှာ ခြံရံလျက်။
ခင်မမမျိုး (၂၆၊ ၉၊ ၂၀၁၀)
ငါတို့ ဒီမိုကရေစီ မရမချင်း၊
(၁၉၈၈ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၁၉ ရက်နေ့တွင် စစ်မိစ္ဆာ တို့၏ ပစ်ခတ်ရမ်းကားမှုကြောင့် ကျဆုံးခဲ့ရသော အခြေခံပညာကျောင်းသူ မ၀င်းမော်ဦးအား လေးစားစွာဖြင့် ဦးညွှတ်အပ်ပါသည်)
လူတဦးတယောက်ရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ပညာသင်ယူနိုင်မှု အရည်အချင်းတွေကို လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့ အခါမှာ သက်ဆိုင်သူ အသုံးပြုတဲ့ ပညာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းကို ကြည့်ရှုအကဲဖြတ်နိုင်တယ်လို့ ပညာသင်ကြားရေးနဲ့သင်ယူရေး သုတေသန နယ်ပယ်က ပညာရှင်တွေက အဆိုပြုထားခဲ့ကြပါတယ်။ ပညာရပ်တခုကို လေ့လာသင်ယူတဲ့အခါမှာ လူတယောက်ဟာ ဒီပညာရပ်ကို အပေါ်ယံ လေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်း (Surface approach to learning) ကို အသုံးပြုသလား၊ နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်း (Deep approach to learning) ကို အသုံးပြုသလားဆိုတာကို သိရင် ဒီလူရဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ အရည်အချင်းကို လေ့လာအကဲဖြတ်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
ပညာရပ်တခုကို လေ့လာတဲ့အခါ အပေါ်ယံလေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းကို အသုံးပြုတတ်သူများဟာ အဓိကအားဖြင့် စာမေးပွဲအောင်ရေး၊ ဘွဲ့လက်မှတ်ရရှိရေး၊ ပညာရပ်တပိုင်းတစကို ရေတိုမှာ လိုသလို ဆွဲသုံးနိုင်ရေး စတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် ရှိသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ အလုပ်တခုကို ရေဆုံးရေဖျား ထိထိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်သူများ မဟုတ်ပဲ၊ ရေသာခို လှေကြုံစီးတတ်သူများ ဖြစ်လာလေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့အတွက် လေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာ အလွတ်မှတ်မိခြင်းနဲ့ မှတ်ထားတာတွေကို မှတ်ထားတဲ့ အတိုင်း ပြန်ပြောနိုင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်ယံလေ့လာသင်ယူတတ်သူများရဲ့ လေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုင်ရာ ဗျူဟာတွေကတော့ လေ့လာရမယ့် စာအုပ်စာပေထဲက ကောင်းနိုးရာရာ အချက်အလက်တွေကို စွဲထုတ်ပြီး၊ အလွတ်မှတ်မိနေအောင် ကျက်မှတ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ လေ့လာနေတဲ့ ပညာရပ်ကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် နားလည်အောင် ပြုလုပ်လေ့မရှိပါဘူး။ အလွတ်ကျက်မှတ်ခြင်းကိုပဲ ပြုလုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သဘောတရားတွေကို ဆက်စပ်တွေးခေါ်ခြင်း မရှိပဲ၊ ဦးနှောက်ထဲမှာ ပညာတွေ ကျန်ဖို့ထက် စာမေးပွဲအဖြေလွှာပေါ်မှာ ရေးချလိုက်နိုင်ဖို့ကိုသာ အာရုံစိုက်လေ့ ရှိကြပါတယ်။
ပညာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာသူ Entwistle နဲ့ Marton တို့ကတော့ ပညာလေ့လာသင်ယူခြင်းဆိုတာ အလွတ်မှတ်မိခြင်းလို့ ရှုမြင်တတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပညာရပ်တွေကို အပေါ်ယံပဲ လေ့လာတတ်လေ့ရှိတာကြောင့် သက်ဆိုင်ရာပညာရပ်ကို နက်နက်နဲနဲ သိနားလည်ခြင်း မရှိကြဘူးလို့ ဆိုထားခဲ့ပါတယ်။
အပေါ်ယံလေ့လာသင်ယူတတ်သူများဟာ ပညာရပ်ရဲ့ အခြေခံသဘောတရားတွေကို လေ့လာတာထက် စာမေးပွဲမှာ ပါနိုင်မယ့် မေးခွန်းတွေမှာ အဖြေဘယ်လိုပေးရမလဲဆိုတာကိုပဲ ကြိုပြီး တွေးလေ့ရှိကြပါတယ်။ စာမေးပွဲနဲ့ အခြား စစ်ဆေးချက်တွေမှာ ကျရှုံးမှာကို အလွန်ပဲ စိုးရိမ်ပူပန်တတ်ကြပါတယ်။ ပညာလေ့လာသင်ယူနေချိန်တွေမှာလဲ ပျင်းရိခြင်းတွေ၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းတွေ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူခြင်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြုတဲ့ ပညာလေ့လာသင်ယူသူများကတော့ ပညာရပ်တခုကို လေ့လာတဲ့အခါမှာ ဒီပညာရပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စာမေးပွဲတွေ အောင်ဖို့နဲ့ ရေတိုအသုံးချနိုင်ရေးကိုပဲ အာရုံထားလေ့ မရှိကြပါဘူး။ ဒီပညာရပ်ကို အသေးစိတ်၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နားလည်အောင် ကြိုးပမ်းလေ့လာကြပါတယ်။ ဒီပညာကို အသုံးပြုပြီး လက်တွေ့မှာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ၊ ပြဿနာတွေကို အဖြေရှာနိုင်ဖို့ ဆက်စပ်တွေးတောလေ့ရှိကြပါတယ်။ ပညာသင်ယူခြင်းအပေါ်မှာ ပျင်းရိငြီးငွေ့ခြင်း မရှိပဲ ပညာရပ်တွေကို တဆင့်ချင်း စနစ်တကျ လေ့လာသင်ယူကြပါတယ်။ ဖြတ်လမ်းလိုက်လေ့ မရှိကြပါဘူး။
ပညာလေ့လာသင်ယူခြင်းမှာ ဖြတ်လမ်းလိုက်တတ်တဲ့ အကျင့်ဆိုးဟာ မိမိကိုယ်တိုင်ကိုသာမက အများကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- နိုင်ငံတွေရဲ့ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု indicators တွေပေါ်မှာ အခြေခံပြီး Multivariate analysis လုပ်တယ် ဆိုပါစို့။ ပညာလေ့လာသင်ယူမှုမှာ ဖြတ်လမ်းလိုက်တတ်သူဟာ ဒီလိုဆန်းစစ်ချက်စာတမ်း တချို့ကို ဖတ်မှတ်၊ အရေးပါတဲ့ အချက်တွေကို ဆွဲနှုတ်ပြီး၊ ဒီအကြောင်းကို သိသယောင်ယောင်နဲ့ တတ်ယောင်ကား လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုလေ့လာဆန်းစစ်ချက်လုပ်နိုင်မယ့် အခြေခံသဘောတရားတွေဖြစ်တဲ့ variable approximations, dimension reductions, linear combinations for separation, Higher-dimensional approximations, allocation rules, misclassification စတာတွေကို သဘောမပေါက်တဲ့ အခါကျတော့ လက်တွေ့ပြုလုပ်ရတဲ့ အခါမှာ ကိုးရို့ကိုးယားတွေ ထွက်လာတတ်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာရပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀ိဇ္ဇာ ပညာရပ်မှာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အခြေခံသဘောတရားတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုမရှိပဲ ဖြတ်လမ်းလိုက် ဆရာလုပ်လိုသူတွေ များလာတဲ့အခါ သက်ဆိုင်ရာ ပညာရပ်နယ်ပယ်မှာသာမက၊ ပညာရပ်နဲ့ လက်တွေ့ဆက်စပ်နေတဲ့ အသုံးချမှု နယ်ပယ်တွေမှာပါ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဖြတ်လမ်းလိုက်ခြင်းဟာ လူတဦးတည်းအတွက်သာမက အများပြည်သူကိုပါ ဒုက္ခရောက်စေတတ် ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းကို ပညာလေ့လာသူအများက အသုံးပြုကြဖို့ အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှပါတယ်။
နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူခြင်းဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လိုအပ်ချက်တရပ်ဖြစ်တဲ့ higher-order thinking (အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှု) ကိုလဲ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ အတွေးအခေါ် အဆင့်အတန်း မြင့်မားသူတွေဟာ လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အိုင်ဒီယာတွေကို အစဉ်အလာ ဓလေ့ထုံးစံကြောင့် ဆိုပြီးတော့လဲ လက်ခံလေ့မရှိပါဘူး။ ဘယ်သူပြောတဲ့ အဆိုအမိန့်စကား ဆိုပြီးတော့လဲ မျက်စိမှိတ်ယုံကြည်လေ့ မရှိပါဘူး။ အိုင်ဒီယာသဘောတရားတွေကို စနစ်တကျလေ့လာပြီးမှ လက်ခံကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။ လက်တွေ့နယ်ပယ်နဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ပြန်လှန်သုံးသပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ပြဿနာတွေရဲ့ အရင်းအမြစ်တွေကို ရှာဖွေပြီး ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကြိုးစားလေ့ရှိကြပါတယ်။ အတွေးအခေါ်သစ်တွေကို ကြံဆရှာဖွေလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဝေဖန်ဆန်းစစ်ခြင်း (Critical thinking) ကို ကျင့်သုံးလေ့ရှိကြပါတယ်။
နိဂုံးချုပ်ဆိုရရင် နက်ရှိုင်းစွာ သင်ယူလေ့လာခြင်းကို အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အရည်အချင်းဟာ အပေါ်ယံသင်ယူလေ့လာခြင်းကို အသုံးပြုသူတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေထက် ရေရှည်မှာ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်တတ်တာကြောင့် နက်ရှိုင်းစွာ သင်ယူလေ့လာသူတွေ များပြားတဲ့ လူအဖွဲ့ အစည်းဟာ အာဂုံဆောင် အလွတ်ကျက်ပြီး အပေါ်ယံသင်ယူလေ့လာသူတွေ များပြားတဲ့ လူ့အဖွဲ့ အစည်းထက် ပိုပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပညာသင်ယူခြင်း နည်းလမ်းနှစ်သွယ် ခွဲခြားမှု ကို အသုံးပြုပြီး လူတဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို လေ့လာသုံးသပ်နိုင်ရုံမက၊ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အနာဂတ်ကိုပါ ခန့်မှန်းတွက်ချက်လို့ ရနိုင်ပါကြောင်း ရေးသားတင်ပြအပ်ပါတယ်။
ပညာရပ်များကို နက်ရှိုင်းစွာ လေ့လာသင်ယူခြင်းမှသည် တိုးတက်သော လူ့ဘောင်ဆီသို့
ခင်မမမျိုး (၁၅၊ ၉၊ ၂၀၁၀)
Entwistle, N. J. and Maton, F. (1984) 'Changing Concepts of Learning', in Marton, F., Hounsell, D. and Entwistle, N. J. (eds) The Experience of Learning, Edinburgh, Scottish Academic Press
Marton, Saljo (1976) 'On Qualitative Differences in Learning I: Outcomes and Processes', British Journal of Educational Psychology, 45, 4-11.
Marton, Saljo (1976) 'On Qualitative Differences in Learning II: Outcome asafunction of the learner's conception of the risk', British Journal of Educational Psychology, 46, 115-117.
အရေးပေါ် ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (မြန်မာပြည်လွတ်မြောက်ရေး အဖွဲ့ချုပ်)
FBF Statement for Zaing Ga Naing
Labels: ကင်ပိန်းများ, လှုံ့ဆော်စာ
Global governance can be defined as the formal and informal mechanisms for managing, regulating and controlling international activity and international systems of interaction. It could be carried in two realms, domestic and international. In the domestic realm, government definesasystem of rule, backed by constitutional authority and an administrative and enforcement apparatus. In the international realm, there cannot be government or formal authority. But with the co-operation among each other and non-governmental organizations, states engage inaprocess of global governance. As the European Union and the UN are the two main transnational institutions of governance, it is important to identify the possibility of the extent to which democratization of the governance of global order and the process of transnational institutionalization in democratizing the governance of global order.
Specifically, Global governance is associated with the world order. The historical world order represent the Westphalian order. It codifiedanew set of normative principles upon which the international states system has been constructed. These principles are fourfold, including territoriality, sovereignty, autonomy and legality. Anthony McGrew (1997) claimed that states have fixed territorial boundaries to define the limits to legal jurisdiction and the scope of political authority.
Within the territory, the state or government can claim the undisputed and exclusive right to rule. According to Osiander (1994), states are also entitled to conduct their own internal and external affairs inamanner which only they are competent to decide and free from external intervention and control.
In addition, there is no legal authority beyond to state which can impose legal duties upon it or its citizens. Connolly (1991) argued that territorialization of democratic politics is predicated uponaworld order based upon Westphalian norms and principles. The concept of world order embraced not only how the inter-state system is governed but also how human civilization is organized politically and economically.
For McGrew (1997), there are four traditional thoughts about democracy and world order such as realism, liberal-internationalism, radicalism and cosmopolitanism. Realism showedasceptical attitude towards the idea that world order can be made subject to the rule of law and democratic decision making. It is based on the understanding of the law of international politics which means no powerful state has relinquished its hegemonic status without some compulsion. It claimed the ethic of global governance as power politics.
From liberal-internationalism point of view, world order is conceived asadecentralized and pluralist system (polyarchy) and geo-governance is much lessaproduct of the exercise of hegemonic power thanaproduct of necessity. It claimed the ethic of global governance as consensus politics. However, radicalism reviewed that the deep structure of world order is global capitalism and it is characterized by the growing globalization of production, finance and consumption, and the growing polarization between rich and poor in world society and within domestic societies. It also claimed that it requires democratization of local and global life. Its vision of world order is the rule of capital and the ethic of global governance is based on humane governance.
For cosmopolitans, world order is an order of both states and people. Brown (1995) mentioned that humanity is viewed both asauniversal community and as organized political communities. Cosmopolitanism claimed that it requires transnational democracy and the ethic of global governance is based on cosmopolitan democracy.
Nevertheless, democratization of the governance of the world order has been an important debate at present with different kinds of thoughts and issues. One of the issue when thinking about the democratization of world order is the human rights. As international law governs relationships between states,agovernment needs to do to claim international legitimacy to keep to the norms expressed in international law while accepting the legitimacy, it is required the external recognition by other members of international society.
Hoffman (1988) pointed out that internal and external recognition offeraconcept of legitimacy which relates the individual to the state in some sort of morally cogent fashion, and which related to the state to other states in the international community. He also suggested that liberal democracy andagood human rights record are necessary ifastate is to achieve global legitimacy. However, the current governance of global order is based upon the principle of sovereignty that leads to the idea that all states reserve the right to decide their future without outside interference. Thus the new global order is required for governance.
Accordingly, European Union is one of the main transnational institution of governance. EU institutions undermine state-central liberal democracy. The vehicles for democratizing the EU can be differentiated into four key potential vehicles such as pan-EU institutions, national assemblies, sub-state authorities and transnational social movements.
Linklater (1996) argued that in the 'Post- Westphalian' scenario, there is no fixed quantity of democratic involvement and accountability to be shared between states, EU institutions and sub-state regions. Withinatransnational context, non-state democratic institutions complement state democracy rather than undermine it, and haveapositive sum rather than zero-sum effect. Thus pan-EU democracy could complement and strengthen national democracy which permits the construction of new political forms that can meet the needs in the context of advancing globalization and regionalization, as Held argues.
Another vehicle for democratizing EU is the national assemblies. As nationalisms are more Europeanized, likewise, the national assemblies. Westlake (1995) argued that across all EU national parliaments, involvement in EU policy-making has increased, mainly in two intergovernmental pillars of Foreign and Security Policy and Justice and Home Affairs. More involvement has been institutionalized in policy committees and reporting procedures. James Goodman (1997) claimed that this combination of national democracy and EU integration could be asademocratization and deepening of the EU integration process.
During the 1970s and 1980s, regional devolution was introduced in France, Spain, Italy, Portugal and Greece and sub-state authorities had becomeapermanent feature of democratic life in EU by the mid 1980s. Then it becameacentral role in the implementation of EU policies. For instance, these sub-national vehicles have developed direct foreign relations with EU institutions and have emerged asapolitical force at the transnational level.
These sub-state authorities have worked with the Commission to establish new cross-regional associations and cross-border association agreements gained legal recognition in 1989. This could help nationalists to become Euro-regionalists. For instance, Basque and Catalan nationalists become enthusiastic Euro-regionalists when Spain joined the EU in 1986. Lindsay (1991) claimed that sub-state regionalists and nationalists have used integration to imbue their message with an internationalist vision.
Furthermore, these sub-state pressures are complemented by increased involvement in transnational social movements. These are capable of posingademocratic alternative to increased transnational economic integration. Sakamaoto (1996) argued that many social movements offerameans of linking with democratizing pressures beyond the immediate EU region which embodied inarange of proactive global movements then challenge the social and developmental costs of economic globalization. These social movements include environmental groups (European Environmental Protection Agency), labour and trade union groups (European Trade Union Confederation), women groups (European Network of Women), lesbian and gay movement, anti-racist movements and pan-European security organizations.
Most these movements challenge national divisions both in the EU and beyond it. Generally these represent both participatory and democratic and forced to the margins of EU decision-making. Accordingly, all social movements are orientated to transnational ideals that have an inherent mobilizing potential at the EU level. Tarrow (1994) concluded thatadialectical relationship has emerged between bureaucratic and business elites and social movement challengers and these challengers are powerful vehicles for democracy in an increasingly transnationalized EU.
Moreover, Goodman (1997) argued that re-democratization beyond the nation- state, toanew Cosmopolitan democracy emerged out of transnational mobilization and the working of pan-EU institutions, national assemblies, sub-state authorities and social movements point the way toareconstituted democracy that flows through and beyond the state to match the transnational constituencies emerged from increased globalization. So it could be claimed that although there has been some means of democratizing the governance of global order for EU as transnational institutions, these are in the way to be effective and adequate means, not merely at present and mostly it seeks to strengthen regional economies only.
Another dimension to tale an example as one of the transnational institutions is the United Nations (UN). The growth of the UN system since 1945 hasagradual extension of international co-operation andadegree of international authority overawide range of social, scientific and economic activities. The UN was created before the end of the Second World War and it was prior to the first use of nuclear arms and the Cold War. It was notasupra-national authority or world government and it was inhibited in the filed of international peace and security by Cold War tensions and the paralysis of the infamous veto arrangements in the Security Council.
The veto represent the collision between democratic politics (the will of the majority of members) and power politics (the will of the five permanent members). Despite the doctrine of state sovereignty encourage the one-member-one-vote principle, the UN and the World Bank both depart from this principle in practice.
According to Archer, inter-governmental organizations may operate as actors, in their own right or as an arena or forum in which members negotiated and/ or as instruments of the member-state policies. The status of international organizations as actors is deceptive. Although some other agencies, IGOs, etc. play the primary actors in international relations, the UN and its related agencies (UNICEF and UNHCR) is funded by the membership subscriptions and voluntary donations of the member states and its policies and decisions are created by the votes of its members. Moreover, there was no standing force under the command of the Secretary General and all UN Peacekeeping forces are created ad hoc.
Besides, the UN General Assembly wasakey forum for legitimizing the principles of self-determination. Vogler (1995) claimed that the recognition and protection of the global commons such as Antarctica, Outer Space, the Oceans and the Ocean floors beyond the limits of national jurisdiction, has been promoted throughaseries of multi-lateral treaties which uphold the concept of the common heritage of mankind. Mark Imber (1997) added that campaigns against nuclear weapons proliferation and against apartheid and the promotion of environmental protection and sustainable development have been increased through the UN General Assembly and its special conferences.
However, in the politics of global governance, NGOs are more familiar to the public. For instance, NGOs such as Green Peace International, WWF and Amnesty International are more aware to public rather the UN and its agencies such as UN Disaster Relief organization, the Convention on Trade in endangered species or the UN Human Rights Committees. NGOs recreate the associations of Civil Society onaglobal or transnational basis. However, governments that oppress, torture and conduct genocide against their own people within the protection of their sovereign boundaries are not to embrace NGO participation in the organs of international government. Even within the UN, member states defend and advance their bargaining positions within international organizations by the conventional standard of national interests, executive privileges and confidentiality.
Accordingly, all traditions are not satisfied with the current state of UN system for global governance and called to reform. Obviously, the democratic reform of the UN is generally promoted by the middle- ranking members withalong tradition of commitment, service and sacrifice to Charter Principles and these include Canada, Norway, Sweden and the Netherlands.
With the creation of the commission on Sustainable Development (CSD), the UN has improved funding for the Global Environmental Facility (GEF). It was co-operated by the World Bank, UNDP and charged with the task of resourcing sustainable development projects. These are different visions of reform for UN but all sit uneasily with the veto and financial powers of the hegemonic states.
In conclusion, means of democratizing the governance of global order do not only rely on the formal transnational institutions such as the EU and the UN because they cannot create effective and adequate means.
Khin Ma Ma Myo (2004)
Brown, C. (1995) 'International Political Theory and the idea of world community', in Booth, K. and Smith, S. (eds) International Relations Theory Today, Cambridge, Polity Press
Connolly, W.E. (1991) 'Democracy and territoriality', Millennium, vol. 20, no.3, pp. 463- 84
Goodman, J. (1997) 'The European Union: reconstituting democracy beyond the nation-state', in McGrew, A. (ed.) The Transformation of Democracy, Cambridge, Polity Press
Held, F. (1995) Democracy and Global Order, Cambridge, Polity Press
Hoffmann, J. (1995) Beyond the State, Cambridge, Polity Press
Imber, M. (1989) USA, ILO, UNESCO and IAEA, London, Macmillan
Linklater, A. (1996) 'Citizenship and sovereignty in the post-Westphalian state', European Journal of International Relations, vol.2, no.1, pp. 77-103
Lindsay, I. (1991) 'The SNP and the lure of Europe', in Gallagher, T. (ed.) Nationalism in the Nineties, Edinburgh, Polygon, pp. 84-102
McGrew, A. (1997) 'Democracy beyond borders? Globalization and the reconstruction of democratic theory and practice', in McGrew, A. (ed.) The Transformation of Democracy, Cambridge, Polity Press
Sakamoto, Y. (1996) 'Democratization, social movements and world order', in R. Cox et. al. (eds.) International Political Economy: Understanding Global Disorder, London, Zed, pp. 129-44
Tarrow, S. (1994) Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press
Westlake, M. (1995) 'The European Parliament, the national parliaments and the 1996 intergovernmental conference', Political Quarterly, vol.3, pp. 59-73
Vogler, J. (1995) The global Commons: A Regime Analysis, London, Wiley
Unity and Diversity: How the EU has responded to social transformations in Europe since 1950s (Essay)
After the two World Wars,acoherently defined idea of Europe was emerged. The political, economic and social systems of Western Europe were devastated. The social composition of European societies has transformed since 1950s. The structures of gender and family life has changed. The process towards unity and efforts at governing the European policy have taken place withahigh-degree of self-consciousness despite of its diversity. This essay will analyse the major social transformations that have affected and how the EU has responded to these social transformations.
There has beenaheated discussion about 'unity and diversity' in most large parts of the world including Europe, Asia, Latin America. However, in other areas except Europe, has arisen after the advent of modernity. The issues about EU were forged in antiquity are revived in modernity. To analyse the major social transformations, the history of Europe should be considered first. Actually, the history of Europe was clearly dominated by the confrontation, war and the efforts to establish clear differences between peoples. Although many scholars argued that the unity of Europe is based on culture and values, there isastrong connection between history and culture. Regarding the European identity, there are two major implications such asacommon culture andacommon historical past.
Guibernau (2001) points out thatacommon culture favours the creation of solidarity bonds among the members ofagiven community and allows them to imagine the community they belong to as separate and distinct from others. Also,acommon historical past, including memories of war, deprivation, victory, repression and success, andacommon project for the future have reinforced the sense ofashared identity among members ofagiven community. According to Thompson (1990), culture is the pattern of meanings embodied in symbolic forms, including actions, utterances and meaningful objects of various kinds, by virtue of which individuals communicate with one another and share their experiences, conceptions and beliefs. So it could not differentiate between the culture and the history because the key elements in the culture such as symbols, languages, heroes, legends and traditions, are bound up with the history.
Moreover, the Enlightenment humanism which was emerged in France and the Industrial Revolution which was originated in England and Scotland outaconsciously European identity to the fore. In fact, Enlightenment ideas prompted the adoption of rationality asamethod and progress. As rationality involved the end of alchemy and magical arguments and fosteredascientific revolution, which culminated in the Industrial Revolution, the social and economic development prompted by the Industrial Revolution, transformed the West and establishedaradical division between industrializing countries and those primarily based around rural economies such as the most of Central and Eastern Europe. Thus, it is obvious that the process of incipient European Convergence initiated by the Enlightenment was enhanced by the emergence of Industrial Revolution.
After the Second World War, the political systems of Western Europe were devastated while the USA became the strongest military and economic powers. Thus the involvement of USA in Western Europe became crucial in the political, economic and military recovery. In April 1949, the Atlantic Pact was enhanced with the USA, Canada and Western Europe and the North Atlantic Treaty Organization (NATO) was emerged during the early 1950s. This relationship hadalarge impact upon the Western Europe restructuring aspects on political, economic, military, social and government systems.
During the Cold War, the Europe was divided into two halves and contributed to some sense of unity among the peoples of Western Europe. In 1991, the Cold war was ended and the fall of the Berlin Wall triggeredaprocess of EU enlargement to include countries in Eastern and Central Europe. Asaresult, the unity of EU was resulted by the shared history with full of the memories of war. The other point to be considered in the shared history was the European Empire. The expansion of the colonies from the fifteenth century onwards was ended after the Second World War and the colonial countries had turned into independent nation-states by the 1960s so that European politics and economics had changed with the signal of the end of 'European Empire'. Most European countries had more emphasized on some institutional agreements.
Another issue that has transformed social compositions of European societies was international migration, that also affects European integration process. As Jenkins argues, integration is notaflattening process of assimilation, but an equal opportunity accompanied by cultural diversity in an atmosphere of mutual tolerance and was cumulatively effected by the decisions made by employers, teachers, doctors and journalists. Also, it is influenced by the decisions of individual immigrants and their associations. The extent of integration depends on the social environment as well as on legislation and public policy.
With the impact of globalisation, the sovereign nation-states are subjected to global markets and international agreements such as the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT). Asaresult, International travel support the large amount of demand from global business, tourism, politics and education. International treaties such as the Schengen Agreement, UN Convention on Asylum and Refugees haveamajor impact on European integration. Within itself in EU, the approaches to immigration policies are different in practice. Zig Layton- Henry (2001) identified that the British approach has been pragmatic and reactive and has moved from imperial expansiveness and openness to greater restrictiveness and tighten immigration controls. The French approach has been more liberal and Germany has beenareluctant country of immigration. However, all countries have accepted the reality of permanent settlement and all are pursuing polices of integration. Moreover, due to the enlargement of EU in 2004, it could greatly encourage intra-European migration but immigrants increase cultural diversity within the EU and have been subject to social exclusion. The nation state's cultural diversity is grounded on the co-existence of various national and ethnic minorities.
The other ways which divide Europeans include social class, gender and family life. Since 1950s, the structures of gender and family life has changed and these changes include political and social emancipation of women, enfranchisement, access to labor market and the possibility of separating sexual activity from reproduction through birth control techniques. The other major diversity include religion and social-economy diversity. The separation between Eastern Orthodox Christianity and Western variations of Christianity has been crucial in establishingadivision between Western and Eastern Europe. Similarly, varying degrees of industrialization and wealth have resulted in the adoption of strong welfare systems in Northern European countries in contrast with the weak and paternalistic welfare models in the South. As Salvador Giner (2001) argues, the great diversity which lies at the heart of the EU leads to the questions about the plausibility of turning on economic and political space generated byapolitical institution, the EU, intoacoherent and governable society.
During the 1970s and 1980s, regional devolution was introduced in France, Spain, Italy, Portugal and Greece and sub-state authorities had becomeapermanent feature of democratic life in EU by the mid 1980s. Then it becameacentral role in the implementation of EU policies. For instance, these sub-national vehicles have developed direct foreign relations with EU institutions and have emerged asapolitical force at the transnational level. These sub-state authorities have worked with the commission to establish new cross-regional associations and cross-border association agreements gained legal recognition in 1989. This could help nationalists to become Euro-regionalists. When Spain joined the EU in 1986, Basque and Catalan nationalists became enthusiastic Euro- regionalists. Lindsay (1991) claimed that sub-state regionalists and nationalists have used integration to imbue their message with an 'internationalist vision'.
Furthermore, these sub-state pressures are complemented by increased involvement in transnational social movements. They are capable of posingademocratic alternative to increased transnational economic integration. Sakamoto (1996) argued that many social movements offerameans of linking with democratizing pressures beyond the immediate EU region which embodied inarange of proactive global movements that challenge the social and development costs of economic globalisation. These social movements include environmental groups (European Environmental Protection Agency), labour and trade union groups (European Trade Union Confederation), Women groups (European Network of Women), lesbian and gay movements, anti-racist movements and Pan-European security organizations.
Most of these movements challenge national divisions both in the EU and beyond it. Generally, these represent both participatory and democratic and forced to the margins of EU decision-making. Accordingly, all social movements are orientated to transnational ideals that have an inherent mobilizing potential at the EU level. Tarrow (1994) argues thatadialectical relationship has emerged between bureaucratic and business elites and social movement 'challengers'. These challengers are powerful vehicles for democracy in an increasingly transnationalized EU. Furthermore, Goodman (1997) argued that re-democratization beyond the nation-state, toanew 'cosmopolitan democracy' emerged out of transnational mobilization and the workings of Pan-EU institutions, national assemblies, sub-state authorities and social movements point the way toareconstituted democracy that flows through and beyond the state to match the transnational constituencies emerged from increased globalisation.
In fact, the EU has becomeanew ground of struggles as communities, collectivities and organizations seek to construct or pursue their own identities, lifestyles and values, while national governments, the EU and other public agencies seek to exert varying degrees of social control. The two dimensions of governance, self-organizing governance from below (bottom-up governance) and regulations from above (top-down governance) interact and combine in distinctive ways in different situations within the EU. In the late twentieth century, there were such changes in the social structure that opened up opportunities for other kinds of cultural identification with different political values. The shift toward less organized forms of production, more mobile workforces and flexible working practices had an impact on the fragmentation of class identity and the dispersion of the members of such working communities upon which collective action was based. Thus social movements represent as the products of changes in the social and economic structure of European societies.
Moreover, the growing affluence, improvement in education and growth of equal opportunities also shifted attention away from economic objectives and the quantitative measurement of human welfare toward new post-materialist goals or values, as argued by J. Smith (2001). In post-war European societies,aprogress towardsaless impersonal and more humanitarian social order has emerged andasociety where ideas are more important than money has developed. People mobilize resources in support of their goals. As soon as they recognize the injustice involved in the issue with which they are concerned, people organize themselves, raise funds and mobilize people for direct action. In terms of public policies, as Baker comments, people tend to haveadesire for greater accountability, transparency and participation in decision-making institutions as opposed to the bureaucratic formal top-down political institutions. Asaresult, social movements and actions such as European Social Forum (ESF), Action for Solidarity, Equality, Environment and Development (ASEED) and environmentalist initiatives were emerged.
J. Smith (2001) points out the shifting patterns of governance at national and European levels regarding the decline of unions and the rise of environmental movements within European societies since 1950s. Due to its involvement in top-down governance carried the price of becoming more formal and less accountable to union members, unions became increasingly divided between officials and rank-and-file members, leading to the decline of influence in political institutions and parties. In contrast, the new environmental movements emerged after 1950s, sought to change public opinion and transform relationships in civil society rather than being integrated into public-policy making bodies. At the same time, the EU and national governments seek to exert greater control to realize objectives agreed upon by political representatives and civil servants across Europe. Nevertheless, attempts to develop environmental policies inacohesive way have arisen along with the emergences of environmental policy making and environmental social movements.
Throughout the history, wars, religious and ideological conflicts, massive economic imbalances andanetwork of sovereign states thriving on mutual hostility have divided Europeans foravery long times and the essence of the grave. However, there has an effective effort being made by contemporary Europeans toward the establishment ofasociety with worth of the civilization and the best traditions of the history since 1950s underacoherently defined idea of Europe and the EU has responded to the transformations of the social composition of European societies in the process towards unity despite of its diversity.
Baker, S. (2001) 'Environmental governance in the EU', in Thompson, G. (ed.) Governing the European Economy, Sage, London
Guibernau, M. (2001) 'Unity and Diversity in Europe' in Guiberbau, M. (ed.) Governing European Diversity, Sage, London
Giner, S. (2001) 'One Europe? The democratic governance ofacontinent', in Guiberbau, M. (ed.) Governing European Diversity, Sage, London
Jenkins, R. (1967) Essays and Speeches, London, Collins
Layton-Henry, Z. (2001) 'Migrants, Refugees and Citizenship', in Guiberbau, M. (ed.) Governing European Diversity, Sage, London
Smith, J. (2001) 'Social Movements in Europe: The rise of environmental governance', in Guiberbau, M. (ed.) Governing European Diversity, Sage, London
Thompson, J. (1990) Ideology and Modern Culture, Cambridge, Polity Press